» आगामी बैशाख १ गतेबाट कुलमान घिसिङ पुनः नियुक्ति हुदै ! यस्तो छ निर्णय हेर्नुहोस, सक्दो शेयर गरौँ आगामी बैशाख १ गतेबाट कुलमान घिसिङ पुनः नियुक्ति हुदै ! यस्तो छ निर्णय हेर्नुहोस, सक्दो शेयर गरौँ – हाम्रो खबर
आगामी बैशाख १ गतेबाट कुलमान घिसिङ पुनः नियुक्ति हुदै ! यस्तो छ निर्णय हेर्नुहोस, सक्दो शेयर गरौँ
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ पुन: नियुक्त हुने पक्का भएको छ। घिसिङलाई पुन नियुक्ति गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताअ व तयार पारेको छ । सो प्रस्ताव आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले लैजाने भएका छन् ।
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलमानलाई फेरि नियुक्ति गर्ने पक्षमा नरहे पनि अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलपछि भने राजी भएको जनाइएको छ ।
४ वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा रहेका कुलमानले नेपाली जनतालाई १८ घण्टे लामो लोडसेडिङबाट मुक्त गरेका थिए । उनको कार्यकाल आइतबार सकिँदै छ । मन्त्रालयदेखि सम्प”पूर्ण जनता समेत कुलमानको पक्षमा उभिएका छन् ।
कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिन केही कानुनी सम,स्या भएत पनि समस्या समाधानका लागि विद्युत प्राधिकरणको ऐन नै सं,शो,धन गर्ने तयारीमा गरिएको बताइएको छ ।
कुलमान घिसिङ नयाँ वर्ष २०७८ सालदेखि पून नियुक्ति हुने सम्भाबना देखिएकाे हुदा सबै जना मिलि कुलमानलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउ देशकाे उज्यालोलाई बचाउ । news89tv बाट
यो पनि पढ्नुहोस प्रचण्डले भैंसी नै पुजा गर्नुको रहस्य यस्तो रहेछ !